★မြန်မာ့အလင်း★: တပ်မတော်အတွက် အချိန်ကောင်းနှင့် အခွင့်အရေးတစ်ခု
တပ်မတော်အတွက် အချိန်ကောင်းနှင့် အခွင့်အရေးတစ်ခု
စစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ပြည်ပရန်တွေပေါ်လာရင် စစ်တပ်က ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာ မွတ်ဆလင်တွေကိုတော့ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါပဲနဲ့ အမတ်ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ၀တပ်ဖွဲ့တွေကလည်း တရုတ်တွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ပြည်နယ်နာမည်ပေးပြီး မြေကိုဖဲ့ပေးထားပါတယ်။ ၀တရုတ်တွေဟာ ကျုပ်တို့ စစ်တပ်အပေါ် အထက်စီးကဆက်ဆံပါတယ်။ အခုလည်း နယ်မြေတွေကို ပိုတောင်းထားပါတယ်။ ဆွေးနွေးရင်လည်း တရုတ်ကြီးအားကိုးနဲ့ လူပါးဝနေပါတယ်။ ဒီမိုမီဒီယာတွေကို အသုံးပြုပြီး စစ်တပ်ကို အပုတ်ချတိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်နေတာ မနည်းတော့ပါဘူး။ ငါတို့မြေလဲခိုးထားသေးတယ်.. ဆော်ဆော်ကားကား ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ရုံမကပဲ.. ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ သည်းခံသင့်တဲ့ အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်နေပါပြီ။ ယောကျားပီပီ လက်ရုံးရည်ယှဉ်ရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ အခုတော့ ဆွေးနွေးပွဲအသစ်တွေ ထပ်လုပ်ဦးမယ်တဲ့။
NLD အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ မြန်မာလူမျိုးအစစ်တွေပါ။ တမြေထဲနေ.. တရေထဲသောက်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ မြန်မာစကားပဲပြောပါတယ်။ ငပိရည်စားတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးက ဦးဆောင်ထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျုပ်တို့က အထင်မကြီးတဲ့သူတွေဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့အဖေကြောင့် အခွင့်ထူးတော့ ခံစားခွင့်ရသင့်ပါတယ်။ သူဟာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း အဖြူ ၊တရုတ်၊ ကုလား တွေထက် အခွင့်အရေးပိုပြီးရသင့်ပါတယ်။ အတိတ်မှာ အမှားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက် … စစ်တပ်က မုန်းတီး နေတာကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါပြီ။ NLD မှတ်ပုံမတင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဒေါသအကြီးအကျယ် ထွက်နေပါတယ်။ 2010ကို ဒင်းတို့မပါလဲနေပစေကွာဆိုတဲ့ အထာမျိုး လုပ်နေပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ 2010 ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ တာဆီးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ များစွာထိုခိုက်ဖို့ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကုလားနဲ့ တရုတ်တွေ မြန်မာမှတ်ပုံတင်မရှိပဲ အမတ်တွေအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရပြီး NLD ပါတီကြီးဖျက်ရမယ့်ကိစ္စအပေါ် မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာတွေက လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (တကယ်လဲ မြန်မာလူမျိုးပါတီကြီးကိုလုံးဝ မဖျက်သင့်ပါဘူး။) တရုတ်နဲ့ ကုလားတွေကိုတော့ အမျိုးမျိုး နားလည်ပေးပြီး… ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး NLD အပေါ် ခက်ထန်မာကြောမှုဟာ စစ်တပ်ရဲ့ သမိုင်းမှာ အမည်းစက်ကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ မြန်မာအချင်းချင်း အမုန်းအဃာတကြီးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုပြီး ပြောစမှတ်ပြုခံရပါလိမ့်မယ်။
၀တရုတ်တွေနဲ့ အခုတကြိမ်ဆွေးနွေးလို့ အဆင်ပြေသွားခဲ့ရင်… မိမိလူမျိုးအချင်းချင်းတော့ ခက်ထန်မာကြောပြီး ၀တရုတ်တွေကို အောက်ကျခံလွန်းတဲ့အတွက် ကျုပ်တို့တပ်မတော်ကြီးကို အထင်သေးစကားတွေ ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ၀တရုတ် တွေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင် စစ်သားတွေ အများကြီးသေကုန်မှာပါ။ (အမှန်တော့ အဲဒီဒေသက မြန်မာလူမျိုးတွေ အများကြီး ဒုက္ခရောက်ပြီးသေကုန်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်သားတွေအသက်ပဲ အလေးထားလို့ အရပ်သားတွေ အကြောင်းထည့်မရေးတော့ပါ။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ အရေးလဲမပြောတော့ပါ)။ ၀တရုတ်တွေကို မတရား အောက်ကျခံပြီး နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာမရှိမှ ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲကို ပြည်သူတွေကထောက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်ကပဲ အထီးကျန်ဆန်စွာ တိုက်ရမယ့် အခြေအနေပါ။ ပြည်သူတွေက အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ လှောင်ပျောင်သရော်မှုများကို ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ 2010အပြီး ဒီမိုကရေစီ တ၀က်တပျက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ လူထုအတွင်း စစ်တပ်ကိုအထင်သေးတဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ အပြောဆိုတွေဟာ တပ်တွင်းစည်းရုံးရေးပါ ထိခိုက်လာမလားဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပါပဲ။
အခုလို နိုင်ငံရေးအရ အသာစီးကရနေတဲ့ အနေအထား၊ NLD မပါပဲ 2010 လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ . . မြန်မာလူမျိုး ဒီမိုသမားတွေအပေါ် သဘောထားကြီးကြောင်းပြသဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လေးစားမှုကို တည်ဆောက်ဖို့လည်း အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ နိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းစီးထားသူတွေကို လွှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် အပြင်မှာရှိနေတဲ့ သူတို့မိသားစုတွေကို ငွေကြေးနဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ပေးသင့်ပါတယ်။ (2010ကို ဖျက်မည်ဆိုသည့် အစွန်းရောက်များကို မလွှတ်ပေးကအပြစ်မတင်ပါ။ သို့သော် ထောက်ပံ့ကြေးကိုတော့ပေးရမည်) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း လွှတ်ဖို့သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း . . . . သူ့ပါတီက အထက်လူကြီးတွေနဲ့ လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံခွင့်ကိုတော့ ပေးကြပါ။ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေကိုလည်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမှုတွေ လုပ်သင့်ပါပြီ။ သူတို့ကို ခရီးစားရိတ်ထုတ်ပေးပြီး 2010ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ ဖိတ်ကြားသင့်ပါတယ်။ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတိုင်း ဒေါ်လာစားမဟုတ်ပဲ… ငွေကြေးခက်ခဲသူတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂလို အမေရိကန်လက်အောက်ခံအဖွဲ့ကို ကြည့်ရှု အကဲခတ်ခွင့်ပေးတာထက်… ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေကို ကြည့်ရှုခွင့်ပေးတာက လက်တွေ့ကျပြီး အချင်းချင်းညီညွတ်မှုလဲဖြစ်စေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ် မဟုတ်လား? ပြည်ပရောက်အဖွဲ့တွေအတွင်းမှာ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်နေသူအားလုံးဟာ မျိုးချစ်စိတ်ကင်းမဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှ လဒ်စားနေတဲ့ အရာရှိတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာအချင်းချင်းသွေးခွဲလိုသူတွေကတော့ စစ်တပ်က ကြောက်လို့ အဲလိုလိုက်လျောရတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုမှုမျိုး လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အလေးထားဖို့မလိုပါဘူး။ သန်း၅၀ကျော်တဲ့ ပြည်သူလူထုကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ သဘောထားကြီးမှုကို အထင်ကြီးလေးစားလာမှာပါ။ အလွန်လှပတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင်ကိုလည်း စိုက်ထူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတူပဲ 2010 ရွေးကောက်ပွဲကို ချိမ့်ချိမ့်သဲသဲ လုပ်နိုင်မှာပါ။ လုံခြုံရေးထူထူထပ်ထပ်နဲ့ ကင်းလှည့်စရာလည်း လိုအပ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်ပရန်သူ ၀တရုတ် တွေကိုသည်းခံနေသလို NLD နဲ့ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံတွေကို သဘောထားကြီး သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ 2010 ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆင်နွဲချင်လို့ပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:14 AM
Fake Russian invasion news spurs panic
Motivation behind Georgia's primetime fake Russian...
Al Qaeda is an Upcoming Nuclear Power according to...
KARENNI - Karenni new music video - The year of 20...
Karenni New Year 2010 KAYAH youth dance
Muslim Women in Acid !!!
Acid Attack on Women in Bangladesh
Pakistani acid attacks on women: Muslim impotent m...
Pakistani Muslim Women Buried Alive Killed In The ...
Bhante Vimalaramsi - Instrucciones de Meditación
Discovering Buddhism Mod 1 - Mind and its Potentia...
"Kill The Jews!" Muslim Children Memorize and Reci...
O'Reilly: Muslims Outraged About "Mohamed Teddy Be...
နှစ်သစ်မှာ အမုန်းအဃာတတွေ ကင်းရှင်းပြီး မေတ္တာထားနို...
Eastern Brains: Probing the Partnership Between Bu...
Vipassana in Buisness
Its More than Meditation!
From Original To Tradtional
Su Tg Mitter
သင်္ကြန်ရေကစားသူများ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု စည်းကမ်းသတ်မှတ်
တိုင်းရင်းသားအစွဲနှင့် မုန်းတီးစိတ်များ သင်္ကြန်ရေနဲ...
Bhutan - The politics of Happiness
2009 - Building water wells with Andrew
Bait Fish Buddhists